ဖုန်းကနေ VC ကိုတစ်ဦးကဗီဒီယို UPLOAD လုပ်နည်း - ဖုန်းကို - 2019
အားလုံးမေးခွန်း၏ပထမဦးဆုံးအသစ်တခု HDD သို့မဟုတ် SSD ကိုဝယ်ယူပြီးနောက်ယခုအချိန်တွင်ကိုအသုံးပြုသည်သော operating system ကိုအတူလုပ်ဖို့ဘာပေါ်ပေါက်။ များသောအသုံးပြုသူများသည်စင်ကြယ် OS ကို install လုပ်မယ့်လိုအပ်ချက်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲအသစ်အဖို့အဟောင်း disk ထဲကရှိပြီးသား system ကို clone ချင်တယ်။
အသစ်တစ်ခုကို HDD တစ်ဦးကို Windows system ကိုပြောင်းရွှေ့
အသုံးပြုသူမှသင့် hard drive ကို upgrade လုပ်ဖို့ကိုရွေးကောက်ပြီး, သင် re-install operating system ကိုရန်မလိုပါ, အဲဒါကိုလွှဲပြောင်းရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒါကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုသူပရိုဖိုင်ကယ်တင်နှင့်အနာဂတျမှာ, သင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမတိုင်မီကဲ့သို့တူညီသောလမ်းအတွက်က Windows ကိုသုံးနိုင်သည်။
နှစ်ခုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ OS ကို drive ကိုနှင့်အသုံးပြုသူဖိုင်တွေသို့ကိုယ်တိုင်ကဝေယူလိုသူအတွက်အကျိုးစီးပွားများအားဖြင့်လွှဲပြောင်း။ operating system ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးနောက်အသစ်က hard drive ကိုပေါ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နှင့်အဟောင်းပေါ်တွင်ရှိနေပါဦးမည်။ အနာဂတျမှာကပုံစံအားဖြင့်အဟောင်း hard drive ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်စက္ကန့် system အဖြစ်ကစွန့်ခွာ။
အကြိုအသုံးပြုသူစနစ်ယူနစ်မှသစ်ကို drive ကိုချိတ်ဆက်နှင့်သင့် PC ကို (ဒီ, BIOS သို့မဟုတ် Windows Explorer ကိုမှတဆင့်ပြု) ကရှာတွေ့ခဲ့သည်သေချာစေရန်လိုအပ်ပါသည်။
Method ကို 1: AOMEI Partition ခွဲလက်ထောက်နျ Standard Edition ကို
AOMEI Partition ခွဲလက်ထောက်နျ Standard Edition ကိုသင်အလွယ်တကူ hard disk ကိုအပေါ် operating system ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာရုရှား interface ကိုရှိပါတယ်, နှင့်နေအိမ်အသုံးပြုမှုအတွက်အခမဲ့ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်ကန့်သတ်နှင့်ပြည့်စုံ။ ထို့ကြောင့်အခမဲ့-version ကိုသာအများဆုံးအသုံးပြုသူများအတွက်သောယေဘုယျအတွက်သင့်လျော်သော, ကို MBR-disk တွေနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ရှိပြီးသားဒေတာများပါဝင်သည်သော HDD ပေါ်တွင်စနစ်ရွှေ့ပြောင်းခြင်း
သင့် hard drive ကိုပြီးသားဆိုဒေတာသိမ်းဆည်းထားသည်, သင်သည်ထိုသူတို့ဖျက်ပစ်ချင်ကြပါဘူးဆိုရငျ, ထဲကအသုံးမပြုတဲ့အာကာသနဲ့ partition ကိုဖန်တီးပါ။
ယင်း utility ကိုအဓိကပြတင်းပေါက်မှာမူလတန်း partition တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါနဲ့ select လုပ်ပါ "အရွယ်အစားပြောင်းပါ".
ထဲကအသုံးမပြုတဲ့အာကာသအစအဦး၌အမှုစနစ်လုပ် သာ. ကောင်း၏ - က Windows အတွက်ပုံတူမျိုးပွားခံရဖို့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့အောက်ပါပုံရိပ်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းညာဘက်ခြမ်းမှလက်ဝဲဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဆွဲယူပါ။
လူအပေါင်းတို့သည်မရရှိနိုင်အာကာသခွဲဝေချထားပေးရန်မနေပါနဲ့: ပထမဦးဆုံးကြောင်းအကြောင်း 20-30 GB ကို၏အသံအတိုးအကျယ်ကိုထည့်သွင်း, ဘယ်လောက်အာကာသသင့်ရဲ့ Windows အထွက်ရှာပါ။ ဒါဟာအချည်းနှီးသောအာကာသ updates များကိုနှင့်အခြား operating လိုအပ်ချက်များအတွက်နောက်ပိုင်းမှာလိုအပ်ပါလိမ့်မည်နည်းမလိုအပ်ပါဘူး, ပိုဖြစ်နိုင်သည်။ ပျမ်းမျှအားတွင်, ပတ်ပတ်လည် 100-150 GB ကိုအသုံးပြုနိုင်မည့် Windows 10, နှင့်ပိုပြီးအဘို့ - လျော့နည်းစိတျဓာတျရှိနိုင်ပါသည်။
သငျသညျအနာဂတျမှာ system ကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုများအတွက်အာကာသ၏ညာဘက်ငွေပမာဏကိုကွဲကွာခဲ့ကြပြီးတာနဲ့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ".
ဒါက scheduled task ဖန်တီးပါလိမ့်မယ်, ထိုသို့ execute မှအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Apply".
စစ်ဆင်ရေး၏ parameters တွေကိုပြသထားပြီး, အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဤနေရာသို့သွားရန်".
အတည်ပြုချက်အတွက်ကို select "Yes" ကို.
တစ်ဦးအလွတ် disk ဒါမှမဟုတ် partition ကိုမှစနစ်ရွှေ့ပြောင်းခြင်း
ပြတင်းပေါက်၏အောက်ခြေတွင်, သငျသညျအလုပ်မလုပ်ချင်တဲ့ drive ကိုရွေးပါနှင့်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ left "ဟုအဆိုပါ OS ကို SSD ကိုသို့မဟုတ် HDD ရွှေ့ပြောင်းခြင်း".
wizard ကိုပုံတူပွားခြင်း Start ကိုနှိပ်ပါ "Next ကို".
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုကိုယ်ပွားဖျော်ဖြေသည်အဘယ်မှာရှိရာအရပျကို select ရန်သင့်အားပြ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင့်ကွန်ပျူတာပြီးသားပုံမှန်သို့မဟုတ်ပြင်ပဒုတိယ HDD, ချိတ်ဆက်ထားရပါမည်။
လွှဲပြောင်းရာအရပ်ကိုယူပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာ drive ကိုမီးမောင်းထိုးပြ။
လာမယ့်တစ်ဦးစစ်ဆေးမှုများအမှတ်အသားထားပါ "ငါက hard disk system ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဒီ disk ကို2ပေါ်မှာရှိသမျှ partitions ကိုဖျက်ပစ်ချင်"။ ဤသည်ကိုသင် OS ကိုမှပုံတူမျိုးပွားအောင်မြင်ခဲ့ဖို့ disk ကို2ပေါ်မှာရှိသမျှ partitions ကိုဖျက်ပစ်ချင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်က partition ကိုဖယ်ရှားခြင်းမရှိဘဲလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်, ဒါပေမယ့်က drive ကိုဖွင့်ထဲကအသုံးမပြုတဲ့နေရာလွတ်ဖြစ်သင့်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုသတင်းအချက်အလက်, ကြှနျုပျတို့အထက်တွင်ပြောနှင့်ပြီ။
အဆိုပါ hard drive ကိုအချည်းနှီးလျှင်, set ဒီစစ်ဆေးမှုများမလိုအပ်ပါ။
Next ကိုသင်အရွယ်အစားဒါမှမဟုတ် OS ကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုတွေနဲ့ဖန်တီးပါလိမ့်မည်သည့်အပိုင်း၏တည်နေရာကိုရွေးပါသတိပေးခံရလိမ့်မည်။
ရရှိနိုင်အာကာသပေါ်တွင် အခြေခံ. သင့်လျော်သောအရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်ပရိုဂရမ်ကိုလက်ရှိစနစ်ကသိမ်းပိုက်သော gigabytes ၏နံပါတ်, နှင့် disc ကို2ဗလာဖြစ်နေသည်လျှင် disc ကို 2. အပေါ်ခွဲဝေခံရဖို့ထိုင်ခုံ၏တူညီသောအရေအတွက်ကအဆုံးအဖြတ်ပေးလိမ့်မည်, သင်အရှင်တစ်ခုလုံးကို drive ပေါ်တွင်တစ်ခုတည်း partition ကိုဖန်တီးအပေါငျးတို့သရရှိနိုင်အသံအတိုးအကျယ်ရွေးနိုင်သည်။
သင်တို့သည်လည်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ရက်တွင်ရွေးချယ်ထားသောအစီအစဉ်ရှိသူများ settings ကိုစွန့်ခွာနိုင်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, နှစ်ခုကဏ္ဍများကိုဖန်တီးလိမ့်မည်: တ - စနစ်, ဒုတိယ - တစ်ဦးအလွတ်အာကာသနှင့်အတူ။
ဆန္ဒရှိပါကတစ်ဦး drive ကိုစာတစ်စောင် assign ။
ဒီဝင်းဒိုးကိုခုနှစ်တွင် (ကံမကောင်းရုရှားဘာသာပြန်ချက်၏လက်ရှိဗားရှင်းအတွက်အဆုံးကိုမဖန်ဆင်းထားသည်) ချက်ချင်းလွှဲပြောင်းပြီးနောက် OS ကိုသစ်ကို HDD ကနေ boot မှပြည်နယ်များမဖြစ်နိုင်ကြလိမ့်မည်။ အဆိုပါအရင်းအမြစ် drive ကို (disk ကို 1) Disable နှင့်ဒီလိုလုပ်ဖို့က၎င်း၏အရပ်ဌာန၌တစ်အလယ်တန်း HDD သိုလှောင်မှု (disc ကို 2) connect, သင် operating system ကိုရွှေ့ပြောင်းကွန်ပျူတာပြီးနောက်ကို turn off ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လိုအပ်သော disk ကို 1 နှင့်တကွ, disc ကို2မယ့်အစားချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
အလေ့အကျင့်မှာ, ကွန်ပျူတာ, အ BIOS ကို boot လုပ်ဖို့ရာကနေ hard drive ကိုအစားထိုးအလုံအလောက်ရှိလိမ့်မည်။
ဤလမျးပျေါမှာအဟောင်း BIOS ကိုပြုနိုင်ပါတယ်:အဆင့်မြင့် BIOS ကို> ပထမဦးစွာ Boot ကိုစက်ပစ္စည်း Features
လမ်းအသစ် BIOS ကို:boot> ပထမဦးစွာ Boot ကိုဦးစားပေး
နှောင့်နှေးစစ်ဆင်ရေးပေါ်လာသည်။ အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Apply"Windows ကို၏ကိုယ်ပွားများအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများစတင်။
ဒါက operating system ကိုလွှဲပြောင်း၏ parameters များကိုပြသပါလိမ့်မည်သည့်အတွက်ပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်။ စာနယ်ဇင်းများ "ဤနေရာသို့သွားရန်".
တစ်ဦးကပြတင်းပေါက်တစ်ခု reboot ပြီးနောက်, သင်ကကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောစစ်ဆင်ရေးဖျော်ဖြေသည်အဘယ်မှာရှိအထူး PreOS mode ကိုခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်ကြောင်းပြောပြပုံပေါ်ပါတယ်။ စာနယ်ဇင်းများ "Yes" ကို.
task ကိုစောင့်ပါ။ ထိုအခါကို Windows အရင်းအမြစ် HDD (disc ကို 1) ကနေနောက်တဖန်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့ဆီသို့ချက်ချင်း Boot တက် disc ကို2ကနေချင်လျှင်, preos အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး mode ကို၏ထွက်ပေါက်ပြီးနောက်, BIOS ကိုရိုက်ထည့်ပါနှငျ့သငျကို boot ရပါမည်သည့်အနေ drive ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်သော့ကိုနှိပ်ပါ။
Method ကို 2: MiniTool Partition ခွဲ Wizard ကို
လည်းအလွယ်တကူလည်ပတ်မှုစနစ်၏အပြောင်းအရွှေ့နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်သောအရာတစ်ဦးကအခမဲ့ utility ကို။ စစ်ဆင်ရေး၏နိယာမအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောယခင်တဦးတည်းအနေဖြင့်မဖြစ်, AOMEI နှင့် MiniTool Partition ခွဲ Wizard ကိုအကြားအဓိကကွာခြားချက် interface နဲ့အဆုံးစွန်သောရုရှားဘာသာစကား၏မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား၏အခြေခံအသိပညာ task ကိုဖြည့်စွက်ရန်။
အဆိုပါ hard drive ကိုမှာသိမ်းထားတဲ့ဖိုင်တွေကို delete ပေမယ့် Windows ကိုမှပြောင်းရွှေ့ဖို့မ, သင်နှစ်ခုကဏ္ဍများသို့ခွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူ - ပထမစနစ်, ဒုတိယဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကပြတင်းပေါက်၌, သင်ကိုယ်ပွားများအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုခငျြသောမူလတန်း partition ကိုရွေးပါ။ လက်ဝဲ pane ထဲကကိုတစ်ဦးစစ်ဆင်ရေးကို select "Partition ခွဲအရွယ်အစားပြောင်းပါ / Move".
အစအဦးအတွက်တစ်ဦးလှတျလပျဧရိယာကိုဖန်တီးပါ။ စနစ် partition ကိုလုံလောက်အောင်အာကာသခဲ့သောကြောင့်လက်ဝဲလက်ျာဘက်၌ရန်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆွဲယူပါ။
ဘယ်လောက်အလေးချိန်သင့်ရဲ့ OS ကိုယခုအချိန်တွင်ထွက်ရှာပါနှင့်အနည်းဆုံး 20-30 GB အထိ (သို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို. ) ၏အသံအတိုးအကျယ်ထည့်ပါ။ သင်၏ system partition ကိုအပေါ် free space အမြဲသင်၏ Windows များ၏နှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့်တည်ငြိမ်ရေးတို့အတွက်ဖြစ်သင့်သည်။ ပျမ်းမျှအားတွင်, သင်စနစ်ဖြင့်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်သည့်အပိုင်းများအတွက် 100-150 GB အထိ (သို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို. ) ခွဲဝေချထားပေးရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါဟာဆိုင်းငံ့တာဝန်ဖန်တီးပေးပါတယ်။ အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Apply"အဆိုပါဇုန်ကိုစတင်ပါရန်။
ခလုတ်ကိုအပေါ်အဓိက window ကိုကလစ်အတွက် "SSD ကို / HD ကို Wizard ကိုမှ OS ကိုရွှေ့ပြောင်း".
Wizard ကိုစတင်နှင့် options နှစ်ခုထဲကတစ်ခုရွေးရန်သင်ကလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်:
အေ အခြားအ HDD မှစနစ် drive ကိုအစားထိုးပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာအားလုံးကဏ္ဍများကိုကူးယူပါလိမ့်မည်။
ခ အခြား HDD သာ operating system သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သာ OS ကိုအသုံးပြုသူဒေတာမရှိဘဲ, ပုံတူမျိုးပွားလိမ့်မည်။
သင်ရုံ Clone Drive, ဒါပေမယ့်သာ windose, ထို့နောက်ကို select မလိုအပ်ခဲ့လျှင် B က နှင့်စာနယ်ဇင်း "Next ကို".
ကိုလည်းကြည့်ပါ: သင်၏တစ်ခုလုံးကို hard drive ကို clone နည်း
operating system ကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးစီးခဲ့သည်အဘယ်မှာရှိ partition ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒေတာအားလုံးကိုဖျက်ပစ်ပါလိမ့်မည်, ဒါကြောင့်သင်ပထမဦးဆုံးအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုကယ်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်, ပြန်အခြားမီဒီယာမှတက်သို့မဟုတ်အထက်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းအလွတ် system ကို partition ကိုဖန်တီးပါ။ ထို့နောက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Next ကို".
သတိပေးခုနှစ်, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Yes" ကို.
disk တခုလုံးအတွက်မှ 1. Fit ကို partition ကို။
အဆိုပါ hard drive ကိုအပျေါ partitions ကိုထားပါ။ ဤသည်တစ်ခုတည်း partition ကိုလူအပေါင်းတို့သည်မရရှိနိုင်အာကာသသိမ်းပိုက်တံ့သော, နေသူများကဖန်တီးပါလိမ့်မည်ဆိုလိုသည်။
အရွယ်အစားပြောင်းစရာမလိုဘဲ 2. Copy ကူး partitions ကို။
အရွယ်အစားကိုချုံ့နေဆဲမပါဘဲ partitions ကိုကူးယူပါ။ အဆိုပါအစီအစဉ်သည်အာကာသအပေါငျးတို့သကြွင်းသောအရာသစ်တစ်ခု, အချည်းနှီးသော partition ကိုပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်သည့်စနစ်တစ်ခု partition ကိုဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။
1 MB အထိမှ partitions ကို align ။ 1 MB အထိမှ partition alignment ကိုတက်။ ဒီ option က activated ကျန်ရစ်နိုင်ပါသည်။
ပစ်မှတ် disk ကိုများအတွက် GUID Partition ခွဲဇယားကိုသုံးပါ။ သင်သည်သင်၏ drive ကိုနေသမျှကာလပတ်လုံးက2တီဘီ, ကို tick ထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်အဖြစ် GPT မှကို MBR မှပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်။
အောက်တွင်သင်ဘယ်ဖက်နှင့်ညာဖက်အပေါ်ထိန်းချုပ်မှုသုံးပြီး partition ကိုအရွယ်အစားနှင့်ရပ်တည်ချက်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုနှင့်ကလစ်လုပ်ပါ "Next ကို".
ယင်းအသိပေးစာနှင့်အတူ box ထဲမှာသငျသညျသစ်ကို HDD ကနေ boot ဖို့ BIOS ကိုအတွက်သင့်လျော်သော setting များကိုသတ်မှတ်ထားဖို့လိုအပျကပြောပါတယ်။ ဤသည် Vindovs လွှဲပြောင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖျော်ဖြေပြီးနောက်ဖျော်ဖြေနိုင်ပါသည်။ , BIOS ထဲမှာ drive ကိုပြောင်းမည်သို့တွင်တွေ့နိုင်ပါသည် နည်းလမ်း 1.
စာနယ်ဇင်းများ "Finish ကို".
အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, အလုပ်တခုကိုနှောင့်နှေးပါလိမ့်မည် "Apply" ယင်း၏အကောင်အထည်ဖော်မှုစတင်နိုင်ရန်အဓိကပြတင်းပေါက်၌တည်၏။
Method ကို 3: Macrium စဉျးစားကွညျ့
နှစ်ခုသည်ယခင်အစီအစဉ်များကဲ့သို့ပင် Macrium ကိုလည်းသုံးစွဲဖို့အခမဲ့ဖြစ်ပြီး, သငျသညျအခက်အခဲမရှိဘဲ operating system ကိုရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြုစဉျးစားပါ။ အဆိုပါ interface နဲ့ထိန်းချုပ်ယခင်နှစ်ခု tools တွေနဲ့မတူဘဲအတွက်အလွန်အဆင်ပြေသည်မဟုတ်, ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်ကကိုင်တွယ်ခံရပ်သွားသည်။ MiniTool Partition ခွဲ Wizard ကိုကာလ၌ရှိသကဲ့သို့မရှိရုရှားဘာသာစကားဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားအသိပညာများပင်သေးငယ်တဲ့ထောက်ပံ့ရေးအလွယ်တကူ OS ကိုပြောင်းရွှေ့ဖျော်ဖြေဖို့လုံလောက်ပါတယ်။
Macrium Download စဉျးစားကွညျ့
ယခင်နှစ်ခုအစီအစဉ်များနှင့်မတူဘဲ Macrium OS ကိုသယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်သည့် drive ကိုအပေါ် pre-ခွဲဝေချထားပေးရန်မနိုင်အခမဲ့ partition ကိုစဉျးစားပါ။ ဒါက disk ကို2ကနေအသုံးပြုသူရဲ့ဖိုင်များကိုဖျက်ပစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဒါကြောင့်စင်ကြယ် HDD သုံးစွဲဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
link ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဒီ disk ကို Clone ... " အဓိကပြတင်းပေါက်၌တည်၏။
ပွင့်လင်းလွှဲပြောင်း Wizard ကို။ ထိပ်မှာ, သင်ကကိုယ်ပွားစေလိုသည့်အနေဖြင့် HDD, select လုပ်ပါ။ default အပေါငျးတို့သ drives တွေကိုမရွေးနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့် drive ကို uncheck လုပ်, သင်အသုံးပြုချင်ကြပါဘူး။
link ကိုပြတင်းပေါက်ကလစ်၏အောက်ခြေတွင် "ကို clone တစ် disk ကို Select လုပ်ပါ ... " သငျတို့သကိုယ်ပွားလုပ်ဆောင်လိုသည့်အပေါ် hard drive ကို select လုပ်ပါ။
disc ကို2မီးမောင်းထိုးပြ, သင်ကိုယ်ပွား parameters တွေကိုရန် link ကိုသုံးနိုင်သည်။
သငျသညျစနစ်ကသိမ်းပိုက်ဖို့ထိုင်ခုံညှိနိုင်ပါတယ်။ ကို default အရံအာကာသမရှိဘဲ partition ကိုဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့မှန်ကန်သောနောက်ဆက်တွဲ updates တွေကိုစနစ် partition ကိုကိုအနည်းဆုံး 20-30 GB အထိ (သို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို. ) ကိုထည့်သွင်းဖို့အကြံပြုနဲ့ Windows လိုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာအားပြိုင်မှုသို့မဟုတ်နံပါတ်များကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
အခြားအ parameters တွေကိုလုပ်နိုင်သောပြောင်းလဲသွားတယ်။
လာမယ့် window တွင်, သင်ကိုယ်ပွားတစ်ဦးအချိန်ဇယားသတ်မှတ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့မလိုအပ်ပါဘူး, ဒါရုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Next ကို".
drive ကိုအတူဖျော်ဖြေမည်ဖြစ်ကြောင်းလုပ်ရပ်များများစာရင်းကိုပြသ, အနှိပ် "Finish ကို".
Restore point တစ်ခုလုပ်ဖို့အဆိုပြုချက်ကိုခုနှစ်တွင်သဘောတူသို့မဟုတ်အဆိုပြုချက်ကိုငြင်းပယ်။
OS ကကိုယ်ပွား running စတင်သည်, အဆုံးမှာသငျသညျအကြောင်းကြားပါလိမ့်မည် "Clone ပြီးစီးခဲ့"လွှဲပြောင်းအောငျမွငျခဲ့ကွောငျးကိုအဓိပ်ပာယျ။
အခုဆိုရင်သင်ကတစ်ဦး Pre-မူလတန်း, BIOS load လုပ်ဖို့အောင်, သစ်ကို drive ထဲမှ boot နိုင်ပါတယ်။ ဒီအမကိုရည်ညွှန်းဖို့ကိုဘယ်လို နည်းလမ်း 1.
ကျနော်တို့တယောက်ကိုတယောက် drive ကိုကနေ OS ကိုလွှဲပြောင်းရန်နှင့် ပတ်သက်. သုံးနည်းလမ်းတွေပြောဆိုသော။ သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, ဒီဟာအလွန်ရိုးရှင်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီး, ပုံမှန်အားဖြင့်မည်သည့်အမှားအယွင်းများနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်မလိုပါ။ Windows ကိုယျပှားပွီးနောကျ, သငျသညျ, drive ကို၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ကနေ Boot တက်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ပြဿနာမရှိလြှငျ, သငျသညျစနစ်ယူနစ်ကနေအဟောင်း HDD ကိုဖယ်ရှားတစ်ခုသို့မဟုတ်အားလပ်ချိန်မှာအဖြစ်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။